Fanamarinana antontan-taratasy nomerika sy sonia IDST WORLD
WWW.FIDULINK.COM > Fampahalalana momba ny fananganana orinasam-pifandraisana an-tserasera na any ivelany manam-pahaizana amin'ny Internet amin'ny famoronana orinasa an-tserasera > Fanamarinana dizitaly momba ny mombamomba ahy Covid-19 Digital Passport Discover IDST WORLD
Mitadiava mpiara-miasa vaovao amin'ny “FiduLink.com ”! Vaovao io!
Fanamarinana nomerika IDST WORLD
Jereo ny fanamarinana ny tena sy ny vahaolana sonia nomerika www.IDST-WORLD.com.
Ao anatin'ny fiarovana ny serivisy an-tserasera FIDULINK.fa nanangana fiaraha-miasa amin'ny sehatra www izahay.IDST-WORLD.com. Hatramin'ny taona 2020 dia ny krizy ara-pahasalamana misy fiantraikany amin'ny planeta dia nanangana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra izahay IDST-WORLD.com mba hahafahan'ny mpanjifanay manao ny fomba fanaony amin'ny Internet, amin'ny fiarovana tanteraka.
Fanamarinana nomerika nomerika Covid-19 Digital Passport IDST WORLD
Ny vahaolana www.IDST-WORLD.com dia mamela ny mpampiasa hiteraka fanamarinana tsy manam-paharoa ( Kaody sonia tsy manam-paharoa + QR code ) mamoaka sy mijery amin'ny lampihazo (www.IDST-WORLD.com)
QR code Azo tadiavina
Kaody sonia tsy manam-paharoa
Digital niorina tsara (Azo karohina)
Covid-19 (fitsapana azo tadiavina)
Vaksiny fanefitra covid19)
Ity vahaolana ity dia tena manome fampiononana ho an'ireo mpampiasa azy eo amin'ny sehatry ny fomba iraisam-pirenena. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny serivisy www.IDST-WORLD.com afaka mandeha malalaka amin'ny tranonkalany ianao.
Maninona no miantso IDST-WORLD.com?
Porofon'ny fanamarinana adiresy
Orinasa fanamarinana fanamarinana any Afrika
Fanamarinana antontan-taratasy momba ny orinasa any Azia
Orinasa fanamarinana fanamarinana any Amerika
Fanamarinana antontan-taratasy momba ny orinasa any Eropa
Orinasa antontan-taratasy fanamarinana any Oceania
Te hamorona ny maha-nomerika anao ve ianao? From 49,00 € miaraka amin'ny www.IDST-WORLD.com - Fanamarihana LITE - 1 taona. Mora, haingana…
QR CODE IDST fanamarinana